HomeWararka MaantaPique: Barcelona Meeqaam Liita Ayay Dhigtay Fabregas
Ciyaaryahanka difaaca kooxda Barcelona , Gerard Pique ayaa ku eedeeyey kooxda Barcelona, inaanay ula dhaqmin sidii uu u qalmayay laacibka khadka dhexe ee ay isku naadiga ka tirsan yihiin, Cesc Fabregas.
Xidigan khadka dhexe ayaa ku guuldaraystay inuu kamid noqdo xulka safka hore ee naadiga Catalanka, tan iyo maalintii uu kaga yimid dhinaca Arsenal ee sanadkii 2011.
Xagaagan, Fabregas waxaa loo badinayaa inuu ku noqonayo horyaalka England, oo uu waliba u wareegayo Manchester City, kooxdan Horyaalka haysataana ay diyaar la tahay inay ku bixiso €37 million heshiis qiimihiisu ku kacayo, sidoo kalena waxaa la warinayaa in Arsenal lafteedu danaynayso soo noqoshada laacibkan sibiqda ku dhaafay.
Pique ayaase rajo ka qaba oo ka filaya saaxiibkii inuu iska ilaabo dalabyadaas oo dhan, kuna negaado Barca , laakiin hadana ka cabsi qaba in kooxdu ay dhigi weydo meeqaamkii uu u qalmayay Cesc.
“Aad baan uga helaa Cesc waanan ka warqabaa inuu soo dhex jubaaxay wakhti adag, iyadoo ay ugu wacnayd meeqaamka liita ee ay Barcelona dhigtay,” ayuu laacibka difaaca ahi ku yidhi saxaafada , mar uu shir jaraa’id oo xulkiisu qabtay ka hadlayay.
“Waa mid kamid ah ciyaaryahanada , ay koox kasta oo dunida ka dhisani , safka hore ee doonisteeda soo, waa xidiga naadiga.
“Iyadoo uu sidaas yahay, hadana dhibaato ayuu kala kulmay Barca. Ma garanayo wuxuu isleeyahay qabo ama yeel imika, oo wali taas kamaanu wada hadlin.
“Waxaan rajaynayaa inuu nala joogi doono, maxaa yeelay, haddii aad eegto darajadiisa xili ciyaareedkii sanadkan, wuxuu ahaa laacibka khadka dhexe ee ugu gool dhalinta sareeya, iyo ka ugu caawinta badan leh. Dabcan waxaan jeclahay inuu nala sii joogo.”
‘Di Maria Fool-xumo Darteed Ayay Real Isaga Iibisay’
Simeone: Guuldaro Qorshaha Uguma Jirto Atletico Madrid
Van Gaal: Wuxuu Ahaa Qaab Ciyaareed Liita
Pique: Barcelona Meeqaam Liita Ayay Dhigtay Fabregas Wararka Ciyaaraha | CadaloolCadalool